ထိုင်းတွင် ညှဉ်းပန်းခံရသူ ကရင်မိန်းကလေးကို မြန်မာအစိုးရ သွားရောက်ကူညီ | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| February 15, 2013 | Hits:7,491
5 | | ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ညှဉ်းပန်းခံရသူ ကရင်မိန်းကလေးကို မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်တွေ့ဆုံကာ ဤသို့ အကူအညီပေးခဲ့သည် (ဓာတ်ပုံ – Hmuu Zaw facebook မှ)
ချင်းမိုင်တွင် ဆာမူရိုင်းကြောင့် မြန်မာများကို ဖမ်းဆီးနေ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Batin Karim February 16, 2013 - 8:28 am	May God save all Myanmar .
Reply	ဗမာ February 16, 2013 - 7:27 pm	မြန်မာအစိုးရရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်၍ကြိုဆိုပါသည်။ လက်သည်းဆိပ်တော့ လက်ထိပ်နာဆိုသလို မိမိတိုင်းရင်းသားများအားလုံးရဲ့ဒုက္ခနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်မှုကို အစိုးရသာမက ကျန်နိုင်ငံသားအားလုံးက ညီညီညွတ်ညွတ်ပါဝင်ကူညီနိုင်ကြပါစေ။
Reply	မင်းခေါင် February 17, 2013 - 1:03 pm	လူမဆန်မှုကတော့အံ့သြစရာပါပဲ
ဒီထက်အံ့သြစရာကတော့ Bangkok post လိုသတင်းစာမျိူးမှာ သူတို့နိုင်ငံသိက္ခာကျမှာစိုးလို့
လားမသိ အရေးပေးဖော်ပြထားခြင်းမတွေ့ရ ရိုဟင်ဂျာကိုကူညီထောက်ပံ့ထားရသောသတင်းမျိူးဆိုလျှင်တော့ BP တို့လက်မနှေးချေ
ဒါကြောင့် ညီအစ်ကိုမျာ့း့့့  တစ်ပါးတို့၏ မြင့်မြတ်မှုကိုမျှော်ကိုးရန်မသင့်
Reply	Salai Lian February 18, 2013 - 1:19 pm	I hope she will receive surgical treatment in America or in England. Emotional scars will take time to get healed. Our prayer and thought are with her and with her parents. Her ordeal is beyond imagination.